के हुन्छ बेलाबेलामा वी’र्य नफाल्दा ? यस्तो छ डाक्टरको ड’रलाग्दो भनाइ ! - Nawalpur Dainik
बियरले कपाललाई प्राकृतिक रुपमा चम’कदार बनाउँछ । प्याजको रसलाई बियरमा मिसाएर लगाउनाले कपाल बढ्नुका साथै यसले कण्डिसनरको पनि काम गर्छ । कपाल लामो बनाउनु छ भने यो उपायलाई सातामा दुईपटक प्रयोग गर्नुहोस् ।
Posted in विचार/ब्लग, स्वाथ्य
Prevदिदीबहिनीले अघिल्लो दिन बिहे गरे भोलिपल्ट एकैठाउँमा झु-ण्डिएर पासो लगाए। भिडियो हेर्नुहोला
Nextउसिनेको आलुले जस्तोसुकै कालोलाई पनि २० मिनेटमा गोरो बनाउछ ! यो तरिका अपनाउनुहोस – भिडियो हेर्नुहोस